Teny fikasana ny amin’ny fanampian’Andriamanitra
Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahy ny amin'izay fomba hitenenanareo, na izay holazainareo; fa homena anareo amin'izany ora izany izay holazainareo." - Mat. 10:19.
Tsy lahateny efa voaomana no tokony hataon'ny mpanompon'i Kristy rehefa hotsaraina noho ny amin'ny finoany izy ireo. Tokony ho isan'andro izany fiomanany izany, ka hotehiriziny ao am-pony ireo fahamarinana sarobidin'ny tenin'Andriamanitra; hataony sakafo ny fampianaran'i Kristy ary hivavaka izy ho fampahatanjahana ny finoany. Rehefa izany, raha hoentina eo amin'ny fitsarana izy ireo dia hampahatsiahy azy ny fahamarinana izay hikasika ny fon'ireo tonga hihaino azy ny Fanahy Masina. Hampandalovin'Andriamanitra ao amin'ny fitadidiany ny fahalalana azony tamin'ny fandinihana amim-pahazotoana ny Soratra Masina amin'ny fotoana ilany izany indrindra.- CSSW, tt. 40,41.
Aoka hiomana ho amin'ny fotoan'ny fizahan-toetra. Izao no fotoana tokony hamantaranao raha toa ianao mamaka ao amin'Ilay vatolampy mandrakizay. Ny tsirairay no tsy maintsy hiaina ny fanandramany avy. Aoka tsy hankinina amin'ny hafa ny hampahazava anao. Rehefa entina eo amin'ny fizahan-toetra ianao, ahoana no hahalalanao raha toa hijoro irery ianao ka tsy hanana sakaiza eto an-tany eo anilanao amin'izany? Moa ve ho tsapanao amin'izany fotoana izany fa i Kristy no manohana anao? Moa ve hitamberina ao an-tsainao ny teny fikasana manao hoe: "Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao"? Marobe ireo voary tsy hita maso hanodidina anao mba hamotika anao. Hataon'i Satana sy ireo anjeliny ny fomba rehetra hanozongozonana anao tsy hijoroanao tsara eo amin'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Raha tsy mibanjina afa-tsy ny Voninahiny anefa ianao, dia tsy hiady saina ny amin'izay fomba hijoroanao ho vavolombelon'ny fahamarinany.- RH, 26 Aprily, 1892.
Ry tanora lahy sy vavy, moa ve ianao mitombo ho lehilahy sy vehivavy lehibe ao amin'i Kristy, ka rehefa ho avy ny fotoan-tsarotra dia tsy ho tafasaraka amin'llay Loharanon'ny herinao ianao? Raha tiantsika ny ho tafajoro amin'ny fotoan'ny fizahan-toetra, dia amin'izao fotoana mbola isian'ny fiadanana izao no tsy maintsy hiainantsika fanandramana mikasika ny zava-panahy. Aoka ho zava-drehetra ho antsika i Kristy, ilay Alfa sy Omega, ilay voalohany sy farany, ilay fiandohana sy fiafarana.- RH, 3 May 1892.